October 15, 2021 – Voice of Myanmar
ရန်ကုန်၊အောက်တိုဘာ ၁၅-၂၀၂၁ KK(VOM) ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့)ပိုင်းမြို့နယ်၊ (၆) ရပ်ကွက်၊ ကျန်စစ်သားလမ်းနဲ့ မေယုလမ်းထောင့်မှာရှိတဲ့ ဆောက်လုပ်ဆဲ အဆောက်အအုံ ဒီကနေ့မနက် ၉နာရီခွဲခန့်က ပြိုကျခဲ့ရာ လူ (၃)ဦးသေဆုံးပြီး (၃)ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ မီးသတ်ဦးစီးဌာနကနေ သိရပါတယ်။ ဆောက်လက်စတိုက်မှာ ကန်ထရိုက်အပါအဝင် ၁၄ဦး အလုပ်လုပ်နေကြပြီး ပြိုကျချိန်မှာ ၈ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ၆ဦးကျန်ရှိရာ သုံးဦးမှာသေဆုံးပြီး သုံးဦးကိုသာ ကယ်ထုတ်နိူင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မီးသတ်ဦးစီးဌာနက ညွန်ကြားရေးမှူးဦးသိန်းထွန်းဦးက ” ၉နာရီ ၄၅မီနစ်မှာ ၃ ဦးကယ်နိူင်တယ်၊ သူတို့ကတော့ အသက်ရှင်လျက်ပဲ၊ ၁၂နာရီ ၂၀မှာ တဦး၊ ၂နာရီ ၂၅မီနစ်မှာ တဦး၊ ၂နာရီ ၄၅မှာ တဦး၊ ၃ဦးကတော့ သေဆုံးခန္ဓာကိုယ်တွေပဲ ပြန်ထုတ်နိူင်ခဲ့တယ်”လို့ VOMကို ပြောပါတယ်။ ဒဏ်ရာရရှိသူတွေနဲ့ သေဆုံးသူတွေကို မြောက်ဥက္ကလာပပြည်သူဆေးရုံကို…
တိုကျို၊ အောက်တိုဘာ-၁၅-၂၀၂၁ မျိုးဆက် (VOM) ဂျပန်ဘီလျှံနာသူဌေး မယ်ဇာဝါယူဆာကူဟာ နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းကို သွားရောက်မယ့်ခရီးစဉ်အတွက် လေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်။ မယ်ဇာဝါနဲ့ ဟီရာနိုယိုဇိုတို့ဟာ ရုရှားရဲ့ ဆိုယုဇ်အာကာသယာဉ်နဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်မှာ နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းကို သွားရောက်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ မယ်ဇာဝါဟာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံးအွန်လိုင်းဖက်ရှင်အရောင်းလုပ်ငန်းကို တည်ထောင်သူဖြစ်ပြီး ဟီရာနိုကတော့ မယ်ဇာဝါနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ အမှုဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းမှာ ၁၂ ရက်ကြာနေထိုင်သွားမှာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းကို သွာရောက်မယ့် ပထမဆုံးဂျပန်နိုင်ငံသား အရပ်သားတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ မော်စကိုပြင်ပမှာရှိတဲ့ ဂါဂါရင် အာကာသလေ့ကျင့်ရေးစင်တာမှာ အာကာသခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ လေ့ကျင့်မှုတွေကို အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်မှာ စတင်ပြုလုပ်နေပါတယ်။ ခရီးစဉ်နီးလာတာနဲ့အမျှ အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်မှုတွေမရှိဘဲ နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းမှာ သူစမ်းသပ်လုပ်ကိုင်ချင်တဲ့အရာ အခု ၁၀၀ ရှိတယ်လို့…
အောက်တိုဘာ ၁၅-၂၀၂၁ Shy V (VOM) တရုတ်နိုင်ငံ၊ ကျယ်‌ဂေါင်မှာ ပိတ်မိနေတဲ့ မြန်မာဘက် တင်သွင်းမယ့် ကုန်တွေကိုထုတ်ယူဖို့ ကျယ်ဂေါင်-မန့်ဝိန်းဂိတ် ဖွင့်ပေးမယ့် အစီအစဉ်ကို နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူညီမှု မရှိတာကြောင့် ဆိုင်းငံ့ကာ ရက်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေဆီက သိရပါတယ်။ “တရုတ်နဲ့ညှိတာ အဆင်မပြေဘူး။ အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျယ်ဂေါင် ဖွင့်ပေးမယ့် ၁၅ ရက်ကိုလည်း ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါပြီ။” လို့ မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တဦးက ပြောပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဘက်က တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ တရုတ်ဘက်က တဖက်သတ်အစီစဥ်ကို လက်မခံဘဲ တရုတ်ဘက်က ကားအစီးရေ ၁၀၀၀ မြန်မာဘက်ကိုဝင်ရင် မြန်မာဘက်ကလည်း တရုတ်နိုင်ငံကို ကားအစီးရေ ၁၀၀၀ ဝင်ခွင့်ပြုရမယ်လို့ တင်ပြလိုက်တာကြောင့် တရုတ်ဘက်ကလည်း အထက်သို့တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရကြောင်း မူဆယ် ဆန်စပါးကုန်စည်ဒိုင် ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးမင်းသိန်းက ပြောပါတယ်။ …
တိုင်ပေ၊ အောက်တိုဘာ-၁၅-၂၀၂၁ မျိုးဆက်(VOM) ထိုင်၀မ်တောင်ပိုင်းမှာ ၁၃ ထပ်အဆောက်အအုံတစ်ခုမီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် လူ ၄၆ ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီး ဒါဇင်များစွာ အပြင်းအထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ တာ၀န်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ Kaohsiung မြို့မှာရှိတဲ့ လူနေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတည်ရှိတဲ့ အဲဒီအဆောက်အအုံမီးလောင်ကျွမ်းမှုဟာ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်အစောပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ မီးသတ်ဌာနကပြောပါတယ်။ မီးသတ်သမားတွေဟာ မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ဖို့ လေးနာရီကျော်ကြာ အချိန်ယူခဲ့ရ လူ ၇၉ ဦးကို ဆေးရုံကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး ၁၄ ဦးကတော့ စိုးရိမ်ဖွယ်အခြေအနေရှိနေပါတယ်။ မီးလောင်ကျွမ်းရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှင်းလင်းသွာမသိရသေးပါဘူး။ တာ၀န်ရှိသူတွေကတော့ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ အဆောက်အအုံရဲ့အနိမ့်ပိုင်းအထပ်တွေမှာတော့ စားသောက်ဆိုင်၊ ကာရာအိုကေနဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံတွေရှိပြီး ဒါတွေက လုပ်ငန်းမလည်ပတ်တော့တာကြပြီလို့ သတင်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ Ref: BBC Photo:Getty Images #voiceofmyanmar #VOM #တိုင်ပေ
နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ၁၅၊၂၀၂၁ KT(VOM) အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက် ညနေက တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်ကို သက်ဆိုင်ရာကခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီး ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ကြောင်း အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေကြီး ဦးခင်မောင်ဇော်က သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ ” အေးအေး ကျုပ်ပါးစပ်ကို ၁၄၄ ထုတ်လိုက်သဗျ ” လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ ပြီးတဲ့ရက်က သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့ရုံးချိန်းမှာ ဦးဝင်းမြင့်ပြောခဲ့တဲ့ နစကက အာဏာမထိမ်းခင် တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေကို တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးခင်မောင်ဇော်ကတဆင့် သတင်းမီဒီယာကို ပြောခဲ့တဲ့ ကိစ္စကြောင့်လို့ သိရပါတယ်။ ဦးခင်မောင်ဇော်ကို ထုတ်ပြန်တဲ့ ပုဒ်မ ၁၄၄ ဆိုတာ ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေ အခန်း၁၀မှာ “အဆောတလျင်ဖြစ်သည့် စိတ်ညိုညင်စေမှု၊ သို့မဟုတ် ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ်ဖြစ်ပွားရန်ရှိသည့်အမှုများတွင် ခေတ္တအမိန့်များအကြောင်း” ပုဒ်မ ၁၄၄။ (၁) ခရိုင်ရာဇဝတ်တရားသူကြီး၊ နယ်ပိုင်ရာဇဝတ်တရားသူကြီး၊ သို့မဟုတ် ယခုပုဒ်မအရ…
နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ-၁၅-၂၀၂၁ KT(VOM) ၂၀၂၁ အောက်တိုဘာ (၁၅)ရက်နေ့တွင်ကျရောက်တဲ့ တနိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း (၆)နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှေ့ရှု့ကာ ဆိုပြီး တရားရုံးအသီးသီးမှာ တရားစွဲဆိုထားဆဲဖြစ်တဲ့ အောက်ဖော်ပြပါ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း များရဲ့ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဆက်စပ်ပါဝင်သူ (၁၁၄)ဦးတို့အား အမှုပိတ်သိမ်းရန် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ( ၄၁၉) အရ အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ကြောင်း ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ (က) AA. (၆၁) ဦး (ခ) KIA. (၂၃) ဦး (ဂ) KNU/KNLA(PC) (၁ ) ဦး (ဃ)MNDAA. (၁) ဦး (င) RCSS/SSA. (၁၂) ဦး (စ)SSPP/SSA. (၅) ဦး (ဆ)TNLA (၁၁)ဦး အထက်ပါ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့…
အေးချမ်းသူ(VOM) YBS ကားပေါ်က ဆင်းလာမယ့် ခရီးသည်ကိုကြည့်ရင်း ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားတွေ သူ့ထက်ငါ အပြေးအလွှား ခရီးသည်ရရှိရေးအတွက် ခေါ်နေကြပါတယ်။ လမ်းဆုံလမ်းခွလမ်းဖြစ် YBS ကားအများစု ရပ်နားရာ မြောက်ဥက္ကလာ ခြောက်ကွေ့မှတ်တိုင်ရဲ့မီးပွိုင့်မှာတော့ စစ်သားတွေ၊ရဲတွေ သေနတ်တွေကိုင်ပြီး ရပ်နေကြပါတယ်။ သေနတ်တွေကိုင်ထားတဲ့ စစ်သားတွေ၊ရဲတွေကို ဂရုမစိုက်နိူင်ဘဲ ပူပြင်းလှတဲ့နေကို အံတုရင်း မိသားစုစားဝတ်နေရေးနဲ့ ခရီးသည်ရဖို့အတွက်ကိုသာ လုံးပန်းနေကြပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဆွဲသူတွေဟာ နေပူလှတဲ့အတွက် အချို့မှာ ဦးထုတ်ဆောင်းထားကြသူတွေရှိသလို အချို့က ဦးထုတ်မဆောင်းနိူင်ကြပေမယ့် အားလုံးမှာတူညီနေစွာမြင်ရတာက ကိုယ်စီmaskတပ်ထားတဲ့ မြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ “အဲ့ဒါတွေ ဂရုမစိုက်နိူင်ဘူး ငါ့ညီရေ၊ သူတို့ကိုကြောက်နေလို့လည်း အပိုပဲ မိသားစုစားဝတ်နေရေးက အရေးကြီးတယ်၊ ခရီးသည်ရမှ ကယ်ရီများများဆွဲမှ ထမင်းစားဖို့ရမှာ နောက်ဖြစ်မှနောက်ရှင်းပေါ့”လို့ ရွှေပေါက်ကံမှာ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဆွဲနေတဲ့ ဦးအေးကြည်က ပြောပါတယ်။ လေဖြတ်နေတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ မိသားစု(၄)ဦးကို…